Zụ ahịa Azụmaahịa: Intel's Star Were n'ọrụ ... onye na-eme ihe nkiri | Martech Zone
Zụ ahịa Azụmaahịa: Intel’s Star Were Were… an Actor
Mgbe mbụ m hụrụ mgbasa ozi Intel ọhụrụ ahụ, enwere m obi ụtọ… maka afọ 20 naanị ihe m maara banyere Intel bụ akara ngosi ahụ, ụda ahụ, na Mantù Blue Man. Pịa ma ọ bụrụ na ịhụghị Intel Star Azụmaahịa:
N'ikpeazụ! Otu nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka teknụzụ anaghị ezo n'azụ ahịa ahịa, mkpọsa ma ọ bụ mgbasa ozi gimmicky. Mana Ewoo, ọ bụ ọ bụghị ikpe ahụ - Intel kediegwu e gosipụtara ihe azụmahịa ọhụrụ omee dochie ezigbo onye ọrụ - Ajay Bhatt.
Lee ohere dapụtara! Ọ bụ ihe dị egwu mkpọsa na ịrịba azụmahịa… ma na-enweghị n'ezie ọrụ na starring na ya, ọ nanị adịghị 'mgbanaka' ezi. Ọmarịcha ọrụ na stereotypical mustached Indian, kwa. Foto dị na Ajay Bhatt bio enweghi otu. Ding, ding, duh kpọọ!
Mee 17, 2009 na 5: 26 PM
Yabụ kedu - ọ tụrụ gị n'anya na azụmaahịa nwere ndị na-eme ihe nkiri?
Mee 17, 2009 na 8: 17 PM
O juru m anya na azụmahịa nke na-ahụ maka ndị ọrụ gị… nwere ezigbo aha onye ọrụ na ezigbo rụzuru… na-eji onye na-eme ihe nkiri. Lee ka ọ ga-esi adị jụụ inwe ezigbo Ajay Bhatt na azụmahịa, yana ụfọdụ nnukwu T-shirts nke ya!
Daalụ maka ịza ajụjụ Dan, Jim!
Mee 18, 2009 na 5: 26 AM
Ọ dịkwa mma na Ajay yiri onye na-eme ihe nkiri (afụ ọnụ n'akụkụ)….
Mee 18, 2009 na 8: 25 AM
M nọnyeere gị Doug, na oge nke eziokwu, Intel kwesịrị ịhọrọ ịbụ nke ziri ezi. Hụ echiche ahụ n'anya, na ndị nwere ọgụgụ isi, nwere ike ịbụ kpakpando na-adabere na ihe ha rụzuru, ọ bụghị ọdịdị ha.
Mana ozi ahụ anaghị ada ada. Ha ji AJay kpọrọ ihe, mana achọghị ya na igwefoto, na-ego onye na-egbu maramara, mana onye isi na-enweghị isi iji kpọọ ya.
Mee 18, 2009 na 8: 33 AM
Ma eleghị anya, Ajay achọghị ịbụ na azụmahịa. ị jụrụ ya?
and dont kpọọ m Jim.
Mee 18, 2009 na 8: 41 AM
Ndo maka nke ahụ! Gbazie (Echere m). Ọ bụrụ na Ajay achọghị ịnọ na azụmaahịa ahụ, ekwenyesiri m ike na ọtụtụ kpakpando ndị ọzọ dị na Intel ga-ezu.
Mee 18, 2009 na 11: 01 AM
Anyi ga-akpo gi Mr Liarpants si Intel Marketing? 🙂
Jun 1, 2009 na 7:45 AM
Ọ bụ ihe ọ watchingụ na-ekiri mgbasa ozi mana ee ekwenyere m na ndị mmadụ kwesịrị igosipụta ... n'agbanyeghị ebe ọ siri ike ịme ihe, onye ọ bụla enweghị ike ịkwado ọrụ na mkpa nke ihe nkiri mgbasa ozi…
Aug 16, 2009 na 12: 23 AM
M na-eche ma ọ bụrụ na Gordon Moore ga-akwụ ụgwọ.